Yakatumirwa ne Tranquillus | May 30, 2018 | hofisi
Kana Shoko iri iro rinoreva izwi remushandisi pane kune dzimwe nzira dzakasununguka uye dzose sechinhu chinoshanda sechinhu chinobatsira.
Tsvaga kusarudza kwatakaita zvachose software yakatsaurirwa kune izwi kushandiswa.
Vhura Hofisi, yakanakisisa yezwi izwi processor:
Iyi software ndiyo inonyanya kufanirwa shure izwi uye nokuda kwechikonzero chakanaka ichi chakafanana neichi ine ofisi yakakwana suite.
Ne Open Office inokwanisa kugadzira, kuisa nekugadzirisa magwaro akagadzirwa pasi pe MS Office (Word, Excel kana Powerpoint).
Iwe wakasununguka kuti uvachengetedze mumhando yepakutanga kana mu format OpenOffice.
Iyi software yakajeka zvikuru uye saka iri nyore kushandisa.
Ichakubvumirawo iwe, seShoko, kuti uende mberi nekugadzira mahwendefa kana mavara.
Google Docs, izwi rekushandura mashoko paIndaneti:
Google Docs yakasiyana nedzimwe mishonga yemapirisa nokuti haifaniri kuiswa.
Iri basa rebasa rinopiwa neGoogle raunogona kuumba, kuronga uye kugovera marudzi ese emagwaro, magwaro, mifananidzo, zvinyorwa, mahwendefa.
Zvikomborero zvekushandisa Google Docs zvakawanda zvekutanga nekwaniso yekuwana magwaro ake chero kupi, asiwo kugovana nekushanda nevamwe uye pakupedzisira, kuronga nekuona pane smartphone kana tablet.
WPS Office, ine zvishoma asi yakajeka izwi izwi remushandisi:
Iyi yehutano software inowanikwa pasina rusununguko kukumbira kune vanodzivirira zvakasimba veShoko.
Izvo zvinyorwa zvinenge zvakangofanana ne MS Office nehutano hunokosha hunoita.
Mukuwedzera kune zvinyorwa, mahwendefa uye mharidzo, unogona kuumba.
Nezvemakatikiti, hapana kunetseka kune rumwe rutivi nokuti WPS Office inogamuchira zvose maofisi eMicrosoft Office.
FreeOffice, a free office suite:
Shoko kushandiswa, spreadsheet kana kuenzanisira, zvinogonawo kuita izvi zvose nezwi software software FreeOffice.
Ndiyo imwe yepamusoro yepurogiramu yemavara nekushandura kwayo nyore uye kushandiswa kwayo yese maitiro.
Mune mamwe mazwi, zvinotora mazano makuru eOverOffice asi neyakakodzera.
Saka iyo ndiyo software inokodzera zvakakwana kumunhu oga uye pabasa.
Zoho Munyori, mukoma muduku weGoogle Docs:
Iri izwi remushandisi rinowanikawo paIndaneti, ingoita bhuku.
Icho chishandiso chakanakira basa rekubatana nekuti chinokutendera iwe kugovera magwaro nenzira yakachengeteka zvachose.
Pakupedzisira, i-offline mode inokubvumira kuti iwe ugadzire rugwaro kuti ruchengetedze paunotevera uchanganidze paIndaneti.
Word processing software August 19th, 2018Tranquillus
pashureNzira yekugadzirisa sei shamwari yako ane mafungire akaipa?
zvinoteveraSei usingagumbuke pabasa?